Kumiswe amaphoyisa omgwaqo angu-70 ngenkohlakalo eGauteng | News24
Kumiswe amaphoyisa omgwaqo angu-70 ngenkohlakalo eGauteng
Gauteng – I-Automobile Association(AA) isikwamukele ukumiswa kwamaphoyisa omgwaqo angu-70 ezikhungweni ezingu-6 zokuhlolelwa ukushayela eGauteng ngezinsolo zenkohlakalo.
I-AA ithi iqaphelile ukuthi: “Izinkinga eziningi eziyamaniswa nokuphepha emgwaqeni ziqala futhi ziphelele ezikhungweni okukhishwa kuzo izincwadi zokushayela. Abaphathi abahlukene eMnyangweni wezokuThutha sebezwakalise ukukhathazeka ngenkohlakalo edla lubi kulezi zikhungo, ebeka abashayeli abangalungele futhi abayingozi emigwaqeni yethu, kanjalo nezimoto ezingaphephile futhi ezingekho esimweni sokuba semgwaqeni.
OLUNYE UDABA: Liqondiswe izigwegwe ikhansela elazama ukukhuza inkohlakalo
“Ngokwethu lokhu kuyakhuthaza, futhi yisinyathelo sokuqala okufanele engabe kudala senzeka ekubhekaneni nalezi zinkinga.”
Lo mnyakazo wenzeke ngemuva kokuthi uNgqongqoshe wezokuthutha, uDipuo Peters, eye wamemezela ngaphambilini kule nyanga ukuthi iRoad Traffic Management Corporation (RTMC) izohlola izikhungo ukuthola izinga lenkohlakalo ekukhishweni kwezincwadi zokushayela kanye nezitifiketi zokuba sesimweni somgwaqo kwezimoto.
I-AA ithi ikholwa ukuthi lokhu okwenzeke eGoli kuseyisiqalo nje.
“Sidinga iRTMC ukuthi yenze ngendlela efanayo ezikhungweni zokuhlolelwa izincwadi zokushayela ezweni lonke, futhi yenze njalo ngokushesha, kwenzelwe ukuphepha emgwaqeni okungcono.”